सरकार नाममा कम्युनिस्ट, काममा दलालः पुन «
सरकार नाममा कम्युनिस्ट, काममा दलालः पुन
प्रकाशित मिति : २३ आश्विन २०७५, मंगलवार ०४:०९
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका पोलिट्ब्यूरो सदस्य ओमप्रकाश पुनले वर्तमान सरकार कम्युनिस्ट भनिएपनि दलाले संचालन गरेको बताएका छन् । पुनले सरकारले ‘समृद्ध र सुखी’ को नारा दिएपनि जनताको जीवनमा कुनै परिवर्तन नभएको बताए ।
हालै मात्र रिहा भएका पुनले रेडियो मिर्मिरसँगको कुराकानीमा जेल पुगेपछि राज्य कस्तो अवस्थामा छ भन्ने कुरा आफूले पनि देखेको बताए । “राज्य कस्तो छ भन्ने थाहा पाउनलाई जेल पुग्नुपर्छ भनिन्छ, जेलमा भएकाहरुको जीवन हेर्दा यो राज्य कति जर्जर छ भन्ने देखिएको छ” पुनले भने । जेलमा दयनिय अवस्थामा बन्दीहरुले जीवन बिताइरहेको बताउँदै सरकारले गम्भीर रुपमा मानव अधिकारको उलंघन गरिरहेको बताए । सबै बन्दीहरुले नयाँ क्रान्तिको माग गरेको अनुभूति भएको पुनले अन्तरवार्ताको क्रममा भने ।
नेता पुनले आफूहरुलाई सरकारले नभएर अदालतको आदेशमा रिहा भएको बताए । उनले भने, “हामी सरकारले होइन अदालतको रिहा भएको हौं । सरकारले छोडेको भए त हिरासतबाटै रिहा हुनु पर्ने हो, भ्रमबाट मुक्त हुनुपर्छ ।” उनले स्वतन्त्र न्यायलयको सरकारले अपमान गरेपछि चौतर्फी दवावपछि आफूहरुलाई छोड्न सरकार बाध्य भएको बताए । उनले सरकारले अझै पनि आफ्ना पार्टीका नेता–कार्यकर्ताहरु गिरफ्तार गरिरहेको बताए ।
अन्तरवार्ताको क्रममा पुनले आफ्नो पार्टी वार्ता विरोधी नभएपनि सरकार त्यसबारे गम्भीर नभएको बताए । “हामी वार्ता विरोधी होइनौं, तर सरकारले हाम्रो पार्टीलाई कसरी लिएको छ ? भन्ने कुरा प्रष्ट छैन । सबै द्वन्द्वरत समूह भनेको के हो ? वैज्ञानिक समाजवादको लागि संघर्ष गरिरहेको पार्टीलाई विखण्डनकारी समूहसँग जोड्ने ?” पुनले अन्तरवार्ताको क्रममा भने । उनले सरकारले वार्ताको कुरा धेरै गरेपनि आफ्नो पार्टीलाई औपचारिक रुपमा पत्र नपठाए समेत बताए ।
नेपालको व्यवस्थाबारे आफ्नो पार्टीका महासचिव विप्लव केपी, प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवासँगै बसेर बहस गर्न तयार रहेको समेत बताए ।